Dhirta gudaha | December 2019
Sida loo qalajiyo jeeriga: qorraxda, foornada iyo koronto koronto
Talooyinka loogu talagalay xannaaneynta guriga ee guriga
Saintpaulia waa warshad gudaha ah oo aad u caadi ah waxaana loo yaqaannaa magaca Kiristaanka Baroque. In ka badan 32 kun oo nooc oo dhirtaas jira ayaa maanta jira. Laakiin sida ugu dhakhsaha badan ee aad u iibsato muqusar, su'aasha markiiba waa soo baxdaa: "Sidee si habboon u daryeeli kartaa?" Doorashada meesha ugu fiican ee Saintpaulia Dhibaatada ugu horreysa ee ka kacday isla markiiba muuqaalka kore ee guriga ayaa ahaa doorashada xaafaddeeda.
Noocyada daryeelka ee geraniums, sida loo koro guri guri
Qodobkani waxaanu kuu sheegi doonaa wax walba oo ku saabsan Geraniums qolka (sidoo kale loo yaqaan "kalachik"), sida: sida loo daryeelo warshadan, waxa ciidda lagu beerayo iyo sida loo doorto dheriga saxda ah. Ha ilaawin inaad ka hadasho hababka faafinta pelargonium. Ma taqaanaa? Qoyska Geranium waxay leeyihiin qiyaastii 800 nooc waxayna ku badan tahay dabiicada koonfurta Afrika iyo Australia.
Kalluunka lushada "Vanya qoyan", daryeelka ubaxa guriga
Balsam (Impatiens) waa xayawaanka naga yaqaan annaga oo ka yimi carruurnimada. Magaca Laatiinka Impatiens waxaa loo tarjumay "taabasho", sababtoo ah abuurka balsam wuu kala firdhinayaa jihooyinka kala duwan haddii aad taabatid. Caadi ahaan ubaxaani waxay la xiriirtaa caruurnimada, sababtoo ah ku dhowaad kasta oo ayeeyo oo guriga ku leh "Spark", sida loo yaqaan.
Suurtagal ma tahay inay beeraan ubax ay guriga ku jiraan?
Sababtoo ah qaabkeeda aan caadi ahayn, quruxda jilicsan ee jilicsan, miiqyada ayaa loo tixgeliyaa calaamad daahir iyo daahir la'aan. Ilaa hadda, ubaxyadaas waxay qurxiyaan xafladaha iyo xafladaha badan ee diimo badan. Ma suurta gal ah in lagu beero ubax at guriga? A ubaxyada ubaxu waxay qurxisaa guri ma aha oo kaliya leh quruxda ubaxa iyo cagaarka dhalaalaya, laakiin sidoo kale leh caraf udgoon oo joogta ah.
Pelargonium: daryeelka, taranta, manjooyin
Dalka hooyo ee pelargonium waa Hindiya iyo Koonfur Afrika. Dhirta caleemaha dhalaalaysa ee leh caleemo cagaaran oo caleemo cagaaran ayaa la og yahay maaha oo kaliya quruxdiisa iyo carafka, laakiin sidoo kale hoygeeda daawooyinka, iyo ehotariyeyaashu waxay aaminsan yihiin in pelargonium ee guriga uu nidaamiyo cimilada maskaxeed ee qoyska. Noocyada Pelargonium Pelargonium waa geedka reer germanum.
Sida ay u koraan ubaxyo orchid qurux badan guriga
Malaha, way adkaan doontaa in la helo ubax ka mid ah noocyada kala duwan ee dhirta gudaha ah oo kor u qaadi doona orchid ee soo jiidashada. Orchid qolka wuxuu leeyahay dhumuc dheer oo khafiif ah, iyo dusha sare waxaa ku yaal ubax aad u fiican. Orchid Orchid iyo fascinates leh noocyo kala duwan iyo midabada. Si kastaba ha noqotee, orchid waa mid furfuran wuxuuna leeyahay tiro ka mid ah dhibaatooyinka daryeelka.
Talooyin loogu talagalay qolka sii kordhaya
Qolka Primula ayaa muddo dheer ku guuleystay qiirada dadka jecel dhirta gudaha. Waxay ka duwan tahay qarsoodi la'aanta marka la tago, quruxda iyo hooska ubaxa. Kaligiis, koronto dhererkeedu wuxuu gaarayaa 25 sentimitir. Nidaamka xididku waa mid xoqan, caleemaha rosette, qiyaastii 7 cm dhexroor. Primrose Blooms laba jeer sannadkii - guga iyo jiilaalka.
Qarsoonaanta beerashada iyo daryeelida berriga gudaha
Haddii aad raadineyso geedka caleenta ah iyo ubax, markaa eu magaciisa lama ogaan karo "ishaada ishaada", laakiin macaamiishu waa wax aad u baahan tahay. Ubaxyadu waa kuwo yaryar oo aan qallafsaneyn, laakiin waxay weli noqon kartaa wax aad u weyn beertaada ama aqalkaaga "aqalka dhirta". Waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo xalka ugu dambeeya si faahfaahsan.
Waxa aad u baahan tahay inaad ogaatid markaad beerto iyo kordhinayso geed gole, talooyinka beeraha ubaxa
Maanta waxaan kuu sheegi doonaa qarsoodiga ah ee beerto iyo koritaanka a "dollar dollar". Waxaad baran doontaa aasaaska daryeelka iyo taranka, iyo sidoo kale waxyaabo kooban oo xiiso leh oo ku saabsan dhirta. Ma taqaanaa? Sanadkii 1908, agaasimaha beerta beerta ee Berlin, Adolph Engler, ayaa magaciisa casriga ah u siiyay warshad ku heshay sababtoo ah cufnaanta caleemaha cawska.
Sanduuqa qolka: daryeelka iyo beerashada
Mid kasta oo naga mid ah waa ogyahay dhirta loo isticmaalo sameynta dijitaal, oo loo yaqaan 'sandwichwood'. Dhowaan, sanduuqa ayaa bilaabay inuu koro sida guri xayawaan ah. Caleemaha yaryar, koritaanka gaabiska ah iyo kartida si aad u dulqaadan karta timo xannibay ayaa kuu oggolaanaysa in aad geedaha geedka ku dhisto.
Sida loo abuuro loona koro ixora gurigaaga
Ixora waa warshad kuleyl ah, oo lagu magacaabay ilaah Hindu. Muuqaalka muuqaalkiisa, ubaxkan waxaa loo tixgeliyaa geedka ugu quruxda badan guriga. Ixora waa geed dherer dheer, oo lagu gartey midab khafiif ah, midab tayo qani ah iyo dallad-qaabab duufan ah.
Sida loo koro anthurium, shuruucda koritaanka iyo daryeelidda ubax
Xayeysiin xiiso leh oo leh midabo dhalaalaya oo aan caadi ahayn, oo u muuqda caag ka fog fog, waxaa lagu magacaabaa anthurium. Ubaxyo adag oo la fiiriyo, oo ay ugu mahad celinayaan qalabkooda, oo loo yaqaan "flamingo ubax." Xaaladaha sii kordhaya ee sii kordhaya Si ay warshaduhu uugu farxaan oo keliya adiga oo leh caleenta dhalaalaya, laakiin sidoo kale ubaxyo qurux badan, waa lagama maarmaan in la fuliyo dhammaan xaaladaha koritaanka.
Cudurada ugu waaweyn iyo cayayaanka anthurium
Anthurium waa ubax qurux badan oo caan ah oo naga yimid oo ka yimid meelo farabadan oo ka mid ah kulaylka Koonfurta iyo Bartamaha Ameerika. Iyadoo ay ugu wacan tahay midabka aan fiicneyn, anthurium waxaa sii kordhaya guriga, laakiin sifooyinka kala duwan, warshadani waxay u nugul tahay noocyada kala duwan ee cudurada. Si loo fahmo sida loo badbaadiyo anthurium haddii ay dhacdo jirro, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa ay yihiin.
Sida loo abuuro oo u koro Caladium guriga, talooyin ku saabsan daryeelidda warshad kuleyl ah
Halkee laga helaa kubbadda, xulashada booska loogu talagalay warshad calamad (Caladium) waa wakiil ka mid ah qoyska Araceae (Araceae). Waddanka reer warshaddan waa Brazil, halkaas oo ay ku korto xeebaha Amazon. Tani waa warshad kuleyl badan oo kuleyl ah, taas oo xaaladaha dabiiciga ah ay gaari karaan ilaa 5 m ee dhererka. Guriga, Caladium waxaa loo adeegsadaa soo saarida alaabta istaandarka ah, iyo aagaggeena geedkan waa mid caan ah sababtoo ah muuqaal qurxoon.
Sababaha huruudka iyo qalajinta caleemaha hydrangea
Hortensia - ubax cajiib ah, oo leh qiyaastii 90 nooc. Si kastaba ha ahaatee, si ay warshadani u noqoto mid farxad leh, waxaad u baahan doontaa inaad si adag u shaqeyso, haddii kale caleemaha hydrangea waxay bilaabi doonaan inay huruud noqdaan, qalajiyaan, iyo geedka laftiisa si buuxda u dhiman doono. Waa maxay sababta hydrangea u qalalan tahay? Sababaha ayaa noqon kara kuwo badan, oo iyaga ka mid ah: Biyaha nadiifka ah; Hawo qallalan ee qolka hargabka ee hargabka; Qalitaan aan sax ahayn; Nalalka khaldan; Bacriminta aan ku filneyn ee carrada (yareeyo aysidhka); Nasiib daro ah dhogor; Doorasho qaldan ee ciidda beeritaanka.
Qalabka waxtarka leh ee Kalanchoe
Dad yar ayaa garanaya, laakiin dhirta Kalanchoe maaha oo kaliya adeega sida qurxinta qolka qolka, laakiin sidoo kale waxay ku caawin kartaa daaweynta xanuunka kala duwan. Caleemaha Fare ee Kalanchoe waxay inta badan leeyihiin guryaha faa'iido leh. Casiirka iyaga ka mid ah ayaa muhiim u ah daawooyinka loogu talagalay dadka waaweyn iyo carruurta. Waxaa lagu diyaarin karaa guriga ama ka iibsan kartaa farmashiyaha.
Qeexida noocyada ugu caansan ee Kalanchoe
Kalanchoe waa geedka dilka ah ee qoyska colossae, kaas oo u yimid Yurub ka soo qulqulka roobka ee Asia, America iyo Australia. Dhowaan, waxay bilaabeen in ay jajabiyaan sida guri, oo ku faraxsan kala duwanaanta. Noocyada Kalanchoe waxaa ku jira in ka badan 200 oo magac, ma tirin noocyo iyo Beelaha.
Isticmaalka aloe ee daawada dhaqameed
Aloe waa geedka caanka ah ee caanka ah ee la koray si loo isticmaalo dambe. Waxaa jira in ka badan 350 nooc oo dhirtaas ah, guriga dhexdiisa, qaar ka mid ah waa la koray - xayawaan, hambalyo, daboolan. Guryaha bogsigu waxay u egtahay cadaanyo aloe iyo geedka aloe. Dheeriga ugu badan ee aloe, oo loo yaqaan 'Barbados' ama 'aloe present'.
Noocyada bilowga ah ee guriga
Begonia waa mid ka mid ah dhirta ugu caansan uguna quruxda badan oo ku yaal xaafadaha daaqadaha gudaha, beeraha iyo beeraha magaalada. Warshadani waxay leedahay in ka badan 900 nooc oo buuxa oo noocyo ah 2000. Ubaxa waxaa markii hore ku sharraxay Michel Begon, oo helay muuqaal qurxoon, ubax aad u qurux badan oo ku yaala Antilles.
Weigel waa warshad caleenta ah ee ku xoortay geedo ba'an, qoyska qoyan. Waxaa jira 15 nooc oo ah weigela, kuwaas oo 7 nooc oo la beeray, iyo sidii geed loo dhisey, kaliya weigela waa ku habboon yahay hybrid. In dabeecadda furan, dhirta inta badan ku koraa bari iyo koonfur bari Asia. Ma taqaanaa? Weigela waxaa loo magacaabaa ka dib bareerka beeraha, kimistaanka iyo sameynta Jarmalka, K.
Sida loo daweeyo shubanka digaagga broiler
Blutang (qandhada catarrhal) lo'da
Isticmaalka dill loogu talagalay dhalaanka cusub: miyay waxtar leedahay, ma jirtaa xaddid, sida dhir loo abuuro iyo waxyaalo kale
Sida loo dhiso koban digaag ah oo loogu talagalay 5 digaag oo leh gacmahooda
Boor "Honey White": sharaxaad ka mid ah noocyada kala duwan iyo beerista agrotechnology
Guryaha waxtarka leh
Chrysanthemums ee dhulka u furan
Beeraha ubaxa waxay ugu yeeraan warshadan xuruufta ah ee agrostemma waxayna ku koraan raaxo ay ku jiraan ubaxooda, laakiin Fiisooyinka waxay u yaqaanaan sida cawska cawska ah, cawska, taas oo inta badan ka shaqeysa beeraha sarreenka iyo jiilaalka. Muxuu geedku u qalmey habdhaqan aan la shaacin iyo dabeecaddiisa runta ah - kuwan iyo su'aalaha kale ayaa loo tixgelin doonaa. Read More
Sida loo abuuro xididdo ah ee abuurka guga: talooyin ka soo Faa'iidooyinka
Daawooyinka ugu wanaagsan ee loola dagaallamo baradiidka Colorado baradho (Qaybta 1)
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dhirta gudaha 2019